!! #မဖြိုးဖြိုးအောင်၏ #ခင်ပွန်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် #ကိုလင်းထက်နိုင် #ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း #သိရ | democracy for burma
!! #မဖြိုးဖြိုးအောင်၏ #ခင်ပွန်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် #ကိုလင်းထက်နိုင် #ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း #သိရ
tags: arrested, ဒီမိုကရေစီပညာရေး လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီ, ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်။, ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ, Burma, JAMES, Lin Htet Naing, Myanmar, phyo phyoaung husband, student
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ( ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ) မှ ကိုလင်းထက်နိုင် ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံရ။
ကိုလင်းထက်နိုင်(ခ) ဂျိမ်းစ် အား ၃. ၁၁. ၁၅ နေ့ ညနေ ၄ နာရီခန့် က သတင်းတပ်ဖွဲ့ မှ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ကိုလင်းထက်နိုင် နှင့် ၎င်း၏ မိဘ အိမ်တို့လည်း အဆက်အသွယ် မရရှိတော့ပါ။
သတင်းမီဒီယာများ မှ တဆင့် နယ်မြေ ရဲစခန်းများ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင်လဲ ဖြေဆိုခြင်း မပြုကြပဲ ဖုန်းမကိုင်ကြတော့ပါ။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၉. ၁၀. ၁၅ နေ့ကလည်း ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ) ဥက္ကဌ ကိုကျော်ကိုကို အား ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ယနေ့ အချိန်ထိ ဆက်သွယ်မှု မရရှိသေးပါ။ ကိုကျော်ကိုကို အား မည်သည့် နေရာတွင် ထားရှိမှန်း မသိရသေး၍ စုံစမ်းနေဆဲ ယခု ထပ်မံ၍ ကိုလင်းထက်နိုင် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
၄. ၁၁. ၁၅
၀၁း၀၀ နာရီ ။
Lin Htet Naing JAMES-husband of phyo phyo aung arrested afternoon confirmed
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်မှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂျိမ်း(ခေါ်) ကိုလင်းထက်နိုင်အား ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်) မွန်းလွဲ ၃နာရီကျော်ခန့်က ရွှေပြည်သာမြို့နယ်သို့ သွားသည့် ၄၈ယာဉ်ပေါ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
ကိုလင်းထက်နိုင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းကို ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ) သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးက ယနေ့ ညပိုင်းတွင် အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကိုလင်းထက်နိုင်သည် ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မဖြိုးဖြိုးအောင်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်ပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ၄င်း၏ မိခင်ဖြစ်သူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ညနေ ၃နာရီအထိ အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းအချိန်နောက်တွင် အဆက်အသွယ်မရရှိတော့ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၃ရက် (ယနေ့) ည ၁၀နာရီ မိနစ် ၅၀ခန့်က ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲမှူး သိန်းဝင်းအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း အစည်းအဝေးလုပ်နေသဖြင့် စခန်းသို့ ဆက်သွယ်ရန် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် တာဝန်မှူးဖြစ်သူကို မေးမြန်းပေးမည်ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ထပ်မံဆက်သွယ်ရာတွင် အဆက်အသွယ် မရရှိတော့ပေ။ ထို့အပြင် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့များသို့ မေးမြန်းသော်လည်း အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ကိုလင်းထက်နိုင်အား မည်သည့်နေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကို မသိရှိရသေးပါ။
အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ပင်မကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တွင် ကိုကျော်ကိုကို၊ ကိုရဲရင့်ကျော်(ခ) ကိုကျော်စိုးမိုးနှင့် ကိုမြတ်သူ (ခ) ကိုမြတ်သူအောင် မန္တလေးတွင် ကိုအောင်မျိုးလှိုင်၊ ကိုရဲရင့်ပိုင်မှူး၊ မိထ္ထီလာတွင် ကိုမြတ်မင်းသူ၊ မြင်းခြံတွင် ကိုမိုးစက်၊ ကိုဇော်လင်းအောင် တို့ကို တရားခံပြေး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထိုသို့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံခဲ့ရ သူများအနက် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်တွင် ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ) ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုအား ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး ကိုလင်းထက်နိုင်မှာ ဒုတိယမြောက်ဖမ်းဆီးခံရသူ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုလင်းထက်နိုင်၏ ဇနီး မဖြိုးဖြိုးအောင်သည် မတ်လ ၁၀ရက်က လက်ပံတန်းတွင် ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရမှု၌ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူ တစ်ဦး ဖြစ်ကာ လက်ရှိအချိန်တွင် သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်၌ ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ELEVEN MEDIA
(Photo Credit to Lin Htet Naing Facebook)
from → ARRESTED, Burma, Lin Htet Naing, MYANMAR
← #BENGALI #al-Qaeda #hacked to #death #writer
#Euro #Burma #Office #EBO is the #main #NGO #destroyed the #unity of the #ethnic #groups. →